Nahoana Isika no Mivavaka? Inona Avy no Tokony Hatao Rehefa Mivavaka?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pidgin (Cameroun) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tiany ho lasa namany isika.
Mifampiresaka ny mpinamana, amin’izay lasa mifandray tsara. Asain’Andriamanitra hiresaka aminy koa isika, mba hifandray tsara aminy. Hoy izy: “Hiantso ahy ianareo ka ho avy hivavaka amiko, ary hihaino anareo aho.” (Jeremia 29:12) Raha miresaka amin’Andriamanitra ianao, dia hanatona azy, ary izy ‘hanatona anao.’ (Jakoba 4:8) Milaza mantsy ny Baiboly hoe: “Akaikin’izay rehetra miantso azy i Jehovah.” (Salamo 145:18) Vao mainka ianao hifandray akaiky amin’Andriamanitra, raha mazoto mivavaka.
“Akaikin’izay rehetra miantso azy i Jehovah.”—Salamo 145:18
Te hanampy anao izy.
Hoy i Jesosy: ‘Iza tokoa moa aminareo raha angatahan’ny zanany mofo no hanome azy vato? Ary raha angatahany trondro no hanome azy bibilava? Koa raha ianareo aza mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, mainka fa ny Rainareo izay any an-danitra! Hanome zava-tsoa ho an’izay mangataka aminy izy.’ (Matio 7:9-11) Manasa antsika hivavaka Andriamanitra satria ‘miahy antsika’ izy sady te hanampy antsika. (1 Petera 5:7) Asainy resahina aminy mihitsy aza ny olana manjo antsika. Hoy ny Filipianina 4:6: “Aza manahy na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana mbamin’ny fisaorana.”
Mila mifandray amin’Andriamanitra isika.
Hitan’ny manam-pahaizana momba ny olombelona hoe an-jatony tapitrisa ny olona te hivavaka. Anisan’izany ireo tsy mino an’Andriamanitra sy misalasala momba ny fisiany. * Hita amin’izany fa noforonina mba hifandray amin’Andriamanitra ny olona. Hoy i Jesosy: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.” (Matio 5:3) Miresaha foana àry amin’Andriamanitra. Anisan’ny fomba ampisehoantsika izany hoe mila azy isika.
Manasa antsika Andriamanitra mba hivavaka aminy. Inona avy ny soa mety ho azontsika raha manaiky isika?
^ feh. 8 Araka ny fanadihadiana nataon’ny Foibem-pikarohan’i Pew, tany Etazonia, tamin’ny 2012, dia ny 11 isan-jaton’ny olona tsy mino an’Andriamanitra sy ny olona misalasala momba ny fisiany no mivavaka, fara fahakeliny, indray mandeha isam-bolana.
Inona avy no Azo Resahina Rehefa Mivavaka?
Milaza ny Baiboly fa azontsika resahina amin’ny vavaka ny zava-drehetra eo amin’ny fiainantsika. Anisan’izany ireto:
Mangataka famelan-keloka: ‘Niaiky ny fahotako teo anatrehanao aho, ary ny fahadisoako tsy mba nosarontsaronako.’—Salamo 32:5.
Misaotra: “Tsara ny misaotra anao, Jehovah ô.”—Salamo 92:1.
Midera: “Hisaotra an’i Jehovah mandrakariva aho, ho eo am-bavako foana ny fiderana azy.”—Salamo 34:1.
Mangataka tari-dalana: “Ampandehano eo amin’ny lalan’ny didinao aho, fa mahafinaritra ahy izany.”—Salamo 119:35.
Mangataka hery: “Tsinjovy aho, ka iantrao. Omeo ny herinao ity mpanomponao.”—Salamo 86:16.
Hizara Hizara Nahoana Isika no Asain’Andriamanitra Mivavaka?